Uncategorized Archives - Sansar Dainik
कैलाली – कैलालीको टीकापुर–१ गणेशपुर शिविरमा मरेको मानिस जिउँदो हुने विश्वासमा पाँच दिनसम्म लास घरमै राखिएको छ । स्थानीय दीपक चौधरीको घरभित्र शव गन्हाउन लागेपछि स्थानीयवासीले प्रहरीलाई खबर गर्दा लास रहेको रहस्य खुलेको हो । बस्ती सुरक्षा समितिका संयोजक बुद्धि दमाईले प्रहरीलाई खबर गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरबाट प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो । शक्तिनगर शिविरका […]
October 29, 2020 adminLeaveaComment on रवी लामिछाने र पत्नी निकितालाई कोरोना पुष्टि
काठमाडौं, १३ कात्तिक । न्यूज २४ टेलिभिजनकर्मी रवि लामेछानेलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । लामिछानेले मंगलबार रातिबाट हल्का ज्वरो आएपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा आफू र श्रीमती निकिता पाैडेल दुवैलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको फेसबुकमार्फत् बिहीबार बिहान जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘हामी दुवैको स्वास्थ्य सामान्य छ, केही पेशागत क्रियाकलपाले र केही आफ्नै लापरबाहीले […]
२१ वर्षिया चेलीकाे पुछियो सिन्दुर नाबालक छोरीलाई टुहुरो बनाए दाउरा चिरेझै बनचरोले चिरेर मारे (भिडियो हेर्नुहोस )
October 20, 2020 adminLeaveaComment on २१ वर्षिया चेलीकाे पुछियो सिन्दुर नाबालक छोरीलाई टुहुरो बनाए दाउरा चिरेझै बनचरोले चिरेर मारे (भिडियो हेर्नुहोस )
झापा कन्काई नगरपालिका ३ मा निकै नै कहालीलाग्दो घटना भएको छ । २१ वर्षको उमेरमै एक किशोरीको सिन्दुर पुछिएको छ भने सानी छोरी टुहुरी भएकी छन् । २३ वर्षका युवा अभिषेक चौधरीलाई उनकै साथीहरुले ज्यान लिएका छन् । २१ वर्षको उमेरमै सिन्दुर बनेकी युवतीको ३ वर्षकी सानी छोरी छन् । झापा सुरुगाँमा साथीहरुले नै ज्यान […]
काठमाडौं । नेपालको लागि हुन्डाईको आधिकारीक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले आफ्ना इलेक्ट्रीक कार कोना र आयोनिकको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले भन्सार, अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुरमा वृद्धिगरेसँगै यी कारको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरिएको थिएन । तर, सरकारले बढेको अन्तःशुल्कमा छुट घोषणा गरेसँगै नयाँ मूल्य कायम भएको हो । सरकारले छुट घोषणा गरेपछि […]
राजेश हमाल माथि लाग्यो गम्भीर आरोप डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन यो गम्भीर हो कडा छानबिन हुनुपर्छ Dr KC (भिडियो हेर्नुहोस )
October 17, 2020 adminLeaveaComment on राजेश हमाल माथि लाग्यो गम्भीर आरोप डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन यो गम्भीर हो कडा छानबिन हुनुपर्छ Dr KC (भिडियो हेर्नुहोस )
काठमाडौ । अभिनेत्री कंगना रनौत आजकल आफ्नो फिल्म थलाइवी को शूटिंगमा व्यस्त छिन्। जयललिताको भूमिकामा खेल्न कंगनाले आफ्नो लुकमा धेरै मेहनत गरिरहेकी छिन्। यस चलचित्रका लागि उनले २० किलो तौल बढाएकी छन् । तर अहिले फिल्म निर्माण भने सकिन लागेको छ । त्यसैले उनी फेरी पुरानै अवस्थामा फर्कन चाहन्छिन् । जसका कारण उनले आफुलाई धेरै […]
१६ बर्षिय आफ्नै छोरीलाई आमाले ब’न्धक बनाएर यस्तोसम्म गराइन, पैसाकै लागि.. ब’लात्कार-को आ’रोप लगाइन, रुदै मिडियामा आएर खोलिन सबै कुरा (भिडियो हेर्नुहोस )
October 12, 2020 adminLeaveaComment on १६ बर्षिय आफ्नै छोरीलाई आमाले ब’न्धक बनाएर यस्तोसम्म गराइन, पैसाकै लागि.. ब’लात्कार-को आ’रोप लगाइन, रुदै मिडियामा आएर खोलिन सबै कुरा (भिडियो हेर्नुहोस )
काठमाडौ । सुनसरीबाट सुरु भएको यो घ’टना, आज हामीले एउटा यस्तो घट’ना लिएर आएका छौ जुन सुन्दा तपाई आफै अचम्ममा पर्नुहुनेछ । आफनै १६ बर्षिय छोरीलाई आमाले यस्तोसम्म गर्न सक्छिन भनेर । यो कुरा हालै लकडाउन अगाडि भ’ारत जानुभन्दा अगाडिको हो, यि युवती कसरी त्यहा“ पुगिन ? भन्ने कुरा सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ र […]
October 12, 2020 adminLeaveaComment on दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस)
निकै नै सुन्दर एक युवतीको बाथरुम भिडियो संसारभर भाइरल बनेको छ । ति युवतीले बाथरुममा छिरेपछि के-के गरिन्, त्यो सबै एक गो’प्य क्या’मेरामा कै’द गरिएको थियो । के छ भिडियोमा ? एक यु’वती बा’थरुममा प्रवेश गर्छिन् । ढोका बन्द गर्छिन् । त्यसपछि पालैसँग तल-माथिको दुवै कपडा खोलेर झुण्ड्याउँछिन् । अब उनको श’रीरमा ब्ल्याक वान पिस […]
October 11, 2020 adminLeaveaComment on बिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् – वास्तविक मनछुने कथा”
बिहेको दिन बेहुली अनमाई कार भित्र दुलही राखियो । म पनि उनीसँगै गाडि भित्र पसे । उनका साथीहरु बाहिरबाट कोई वाई वाई को इसारा, कोहि रुदै त कोहि बेहुलिलाई हसाउदै थिए । तर उनी एकोहोरो रुदै थिईन अनि कताकता म पनि रुन बाध्य हुन्छु जस्तो लाग्दै थियो तर मेरा साथीहरूले मलाई पनि हसाँई रहेका थिए […]
विवाहको पहिलो रातमै श्रीमानले धेरै माया गर्न थालेपछि श्रीमतिले
October 10, 2020 adminLeaveaComment on विवाहको पहिलो रातमै श्रीमानले धेरै माया गर्न थालेपछि श्रीमतिले
October 8, 2020 adminLeaveaComment on पुरुषभन्दा राम्रो काम गर्छन महिला मिस्त्री तस्बिरसहित
पोखरा कामको खोजीमा धेरै नेपाली दिदीबहिनी विदेश गएका छन्। राम्रो काम पाइने प्रलोभनमा परेर विदेश गएका धेरै दिदीबहिनीले रोजगारका क्रममा कठिन जिवन बाँच्न बाध्य भएका समाचार आइरहेका छन्। यस्ता समाचार आइरहेपनि कामको खोजीमा नेपाली युवतीहरु विदेश जाने क्रम भने रोकिएको छैन्। यतिबेला कोरोना कहरले वैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरै युवायुवती बेरोजगार भएर देश फर्कने प्रतिक्षामा छन्।देशमा […]